Mobile Apps: စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ ရှေ့ပြေးပုံစံပြုလုပ်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းသည်မည်မျှအရေးကြီးသနည်း။ | Martech Zone
Mobile Apps: စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ ရှေ့ပြေးပုံစံပြုလုပ်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းသည်မည်မျှအရေးကြီးသနည်း။
သောကြာနေ့, အောက်တိုဘာလ 9, 2015 သောကြာနေ့, အောက်တိုဘာလ 9, 2015 Douglas Karr
အတူလုပ်ကိုင်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်အတော်လေးနည်းနည်းရှိပါတယ် စိတ်ကြိုက် mobile application ရုံစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်ရှေ့ပြေးပုံစံအဆင့်မှာ developer များ။ သင်၏မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်း၏အောင်မြင်မှုအတွက်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအကောင်းဆုံးကိုသေချာစေရန်အချိန်ပေးခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဒါပေမယ့် ၅၂ ရာခိုင်နှုန်းကသာစမ်းသပ်မှုအစီအစဉ်ကိုလုပ်သည် သူတို့ရဲ့မိုဘိုင်း application များအတွက် Accenture ၏အစီရင်ခံစာအရ!
[box type = "download" align = "aligncenter" class = "" width = "90%"] ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွဲဖက်လင့်ခ်ကိုသုံးပါ သင်၏ Proto.io မှ 30% အထိရယူပါ နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်း! ဘရောင်ဇာသို့မဟုတ်မိုဘိုင်းစက်မှတစ်ဆင့်ကြည့်ရှုနိုင်သောမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမြင့်မားသောသစ္စာရှိမှုအပြည့်အဝအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သောမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကိုဖန်တီးပါ။
အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင်ပြသထားတယ် အားလုံးအမှုဆောင်အရာရှိ၏ထက်ဝက်နီးပါး သူတို့ရဲ့မိုဘိုင်းလျှောက်လွှာအတွေ့အကြုံဟာနိမ့်ကျတယ်လို့ခံစားရတယ်။ Ouch! ၎င်းကိုသုံးစွဲသူအပြုအမူနှင့်ပေါင်းစည်းပါ။ TechCrunch ကသာအချက်အလက်များကိုမျှဝေသည် ၇၉% သောမိုဘိုင်းအသုံးပြုသူများသည်အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒုတိယအကြိမ်စမ်းသပ်ကြလိမ့်မည် သူတို့မှာကောင်းမွန်တဲ့သုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုရင်၊ ဒုတိယအကြိမ်ကြိုးစားနေသူ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းကိုကျဆင်းသွားစေတယ်။ ဒါကသင်၏အယူအဆ အသုံးပြုသူများသည်သင်၏စမ်းသပ်သူများဖြစ်လိမ့်မည် နောက်ဆုံးပေါ် update များပေါ်တွင်သင်နှင့်အတူဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းထက်၎င်းတို့သည်ရှုံးနိမ့်ခြင်းကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားခြင်းဖြင့်ဆိုးဝါးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည့်မိုဘိုင်းခေါင်းဆောင် ၅၆ ရာခိုင်နှုန်းကအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရန် ၇ လမှ ၁ နှစ်ကျော်ကြာမြင့်ပြီး ၁၈ ရာခိုင်နှုန်းကအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုလျှင်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀၀ မှဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀၀ အထိသုံးစွဲကြသည်ဟုဆိုသည်။ စီအိုင်အေ၏ ၅၀ ရာနှုန်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်သည်အလွန်ကြာသည်ဟုထင်ကြသည်။ ၂၄ ရာခိုင်နှုန်းကစိတ်ပျက်စရာအကြောင်းတစ်ခုအဖြစ်ဖော်ပြကြသည်။ ရင်းမြစ် - ကျောက်တံတား.
ဒါကမမြင်ရသောကုမ္ပဏီများအတွက်ကြီးမားသောကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည် မိုဘိုင်း app ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာပါ.
Tags: Accentureဒီဂျစ်တယ် accentureစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများmobiel အက်ပလီကေးရှင်းဝယ်လိုအားmobiel လျှောက်လွှာကုန်ကျစရိတ်မိုဘိုင်း app ကုန်ကျစရိတ်မိုဘိုင်း app ရှေ့ပြေးပုံစံမိုဘိုင်း app ရှေ့ပြေးပုံစံမိုဘိုင်းစမ်းသပ်ခြင်းproto.io
အောင်မြင်သော B2B ပါ ၀ င်သည့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာသည်အာဏာပိုင်များကိုလိုအပ်သည်
စက်တင်ဘာ 8, 2017 မှာ 3: 48 AM
“ သုံးစွဲသူရဲ့အတွေ့အကြုံအကောင်းဆုံးကိုသေချာအောင်လုပ်ဖို့အတွက်အချိန်ဖြုန်းခြင်းသည်သင့်မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းကိုလက်ခံပြီးအသုံးပြုခြင်း၏အောင်မြင်မှုအတွက်အရေးကြီးသည်။ “
14:2018 pm မှာဇွန် 1, 14
ဆိုလိုသည်မှာမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ရာတွင်သုံးစွဲသူ၏အတွေ့အကြုံတွင်သိသာထင်ရှားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏ရန်ပုံငွေအားလုံးကိုအက်ပလီကေးရှင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွင်ထည့်သွင်းထားပါကအသုံးပြုရန်ခက်ခဲသည်ဆိုလျှင်သင်အချိန်နှင့်ငွေများစွာဖြုန်းတီးလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်သင်၏ပရိသတ်ကိုသင်၏လျှောက်လွှာကိုဒုတိယအကြိမ်ကြိုးစားရန်ပြောဆိုခြင်းသည်အလွန်ခက်ခဲပြီးအလွန်ခက်ခဲသည်။